Cutubkii ugu horeeyay ee kasocda ciidamada Jabuuti oo maanta gaaray Muqdisho. – Radio Daljir
Cutubkii ugu horeeyay ee kasocda ciidamada Jabuuti oo maanta gaaray Muqdisho.
Muqdisho,Dec,20 -Boqolaal askari oo ka socda dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horaysay maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaliya,kuwaasi oo qayb ka ah qorshaha ciidamada dowladda Jabuuti ay ugu biirayaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ra’isal wasaaraha dowladda faderaalka Dr Cabdiwali Maxamed Cali oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar shaqo oo uu ugu maqnaa dalka Kenya ayaa ka mid ahaa madaxdii dowladda faderaalka ee ka qaybgashay soo dhoweynta ciidamada Jabuuti.
Amaanka ayaa ah mid siweyn loo adkeeyay,waxaana wadooyinka isku xira garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo madaxtooyada ku sugan ciidamada Midowga Afrika ee dalalka Burundi iyo Uganda.
Dowladda Jabuuti ayaa noqonaysa wadankii sadexaad ee ciidamadeeda usoo dirtay magaalada Muqdisho si’ay ugu qaybqaataan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo horay ay u wadeen dalalka Burundi iyo Uganda.
Kooxda Al-Shabaab ee dagaalada kula jirta ciidamada dowladda iyo AMISOM ayaa dhawaan ku hanjabay inay dagaal la galayaan ciidamada dowladda Jabuuti ee ka mid noqonaya AMISOM.